Ndị na-ebupụta ihe maka ndị na-ebubata ihe eji eme plastik na ụlọ ọrụ mmepụta ihe - Ndị na-ebupụta ihe ndị China maka ndị na-emepụta ihe eji eme plastik.
All di iche iche nke JHD extruder na tumadi ji na PVC, Pee, PP, PS, ABS, PA, PMMA, PET wdg plastic ihe extrusion.N'ịbụ onye eji ebu kwesịrị ekwesị na akụrụngwa ala, onye na-apụ apụ nwere ike ịmepụta mpempe akwụkwọ plastik, ihe nkiri, profaịlụ, ọkpọkọ wdg.Enwere ike iji otu ịghasa extruder na pelletizing ubi.
JHD Single ịghasa extruder na emelitere ọhụrụ imewe na ele , eletriki usoro , siri ike frame .Ọ ga-arụ ọrụ na ndị ọzọ arụmọrụ na ike ịzọpụta .
Soulution nke ahaziri ahazi na-adị mgbe niile maka ngwa dị iche iche, na-ejikwa ihe plastik dị iche iche.
All ụdị JHP yiri ejima ịghasa extruders na anyị ụlọ ọrụ emebe karịsịa maka amị SPC / LVT flooring na PVC ọkpọkọ na PVC pelletizing na ọbụna plasticity, otu ebe àgwà, elu mmepụta, sara mbara ngwa na ogologo anwụ ngwa ngwa.Igwe ejima ịghasa extruder parallel nwere nhọrọ abụọ na njikwa mita nkịtị na sistemụ njikwa kọmputa yana nhọrọ abụọ maka sistemụ moto DC na AC.